रोचक Archives - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! रोचक
शिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुगेपछि बर्सेनि करोडाँैको......
यस्तो ठाउँ जहाँ छात्राहरुले पनि उभिएर पिसाब फेर्नुपर्ने !
काठमाण्डौँ, माघ ४ । चीनको एउटा विश्वविद्यालयले छात्राहरुलाई उभिएर पिसाब फेर्न प्रेरित गरेको छ । विश्वविद्यालयमा छात्राहरुको लागि पनि पुरुषको जस्तै ‘युरिनल’ जडान गरिएपछि सबै छक्क परेका छन् ।
चीनको उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको सान्सी नर्मल युनिभर्सिटीले पानीको बचत गर्न भन्दै यस्तो प्रयोग गरेको......
अब्राहम लिङ्कन अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति हुन् । उनको कार्यकाल सन १८६१ देखि १८६५ सम्म रह्यो । अमेरिकामा दास प्रथा अन्त्यको श्रेय यिनै लिङ्कनलाई जान्छ । उनी पहिलो रिपब्लिकन थिए, जो अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । लिङ्कनको जन्म एक गरीब अश्वेत परिवारमा भएको थियो । उनको जीवन निकै संघर्ष र चुनौतीपूर्ण रह्यो ।......
७० को उमेरमा २९ वर्ष कान्छीसँग प्रेम बस्यो, ४ विवाह गर्ने यी नायक फोटो फिचर !
१६ जनवरी सन् १९४६ मा लाहोर (पाकिस्तान) मा जन्मिएका कबिर बेदी ७१ वर्ष भइसकेका छन् । आफ्नो ७० औं जन्मदिनको एक दिन पहिले सन् २०१६ मा उनले आफूभन्दा २९ वर्ष कान्छी प्रेमिका परबिन दोसान्जसँग विवाह गरे । अचम्मको कुरा के छ भने कबिरकी चौथी श्रीमती परबिन (उमेर करिब २४ वर्ष) उनकी छोरी पूजा बेदी (४६) भन्दा चार वर्ष......
एक १२ वर्षीया किशोरीले लाइभ भिडियो प्रशारण गर्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । हजारौँले हरेको उक्त भिडियोमा केटलिनले आफ्नै परिवारको सदस्यले आफूमाथि यौनहिंसाको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै झुण्डिएर ज्यान दिएकी थिइन् । ती किशोरीले लाइभ स्ट्रिमिङ एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलबाट आत्महत्याको प्रशारण......
अन्तिम संस्कार चलिरहँदा ‘मृतक’ जुरुक्क उठेपछि !
काठमाण्डौ, माघ ३ । मरेको भनेर कफिनमा राखिएका व्यक्ति एकाएक जुरुक्क उठेपछि देख्नेहरु स्तब्ध बनेका छन् । यो चीनको सिचुवान प्रदेशस्थित जुनलियान काउन्टीमा भएको घटना हो ।
‘सास फेर्न रोकिएको र हात-गोडा चिसा भएको’ भनेर ७५ वर्षिय वृद्धलाई उनका छोरा र आफन्तले मृत घोषित गरेका थिए । तर कफिनमा राखेर अन्तिम......
उपत्यकाको जमिन भासिने खतरा : जमिनमुनिको पानी निरन्तर घट्दै,
काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनि पानीको सतह हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । जनघनत्व बढ्दै जाँदा जमिनमुनिबाट अत्यधिक पानी निकाल्न थालिएकाले उपत्यकाको जमिन भासिने खतरा भएको विज्ञहरूले बताएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका सिनियर डिभिजन हाइड्रोजियोलोजिस्ट सुरेन्द्रराज......
१३ वर्षीय विद्यार्थीसँग सम्बन्ध बनाएर गर्भवती हुने शिक्षिकालाई १० वर्ष जेल सजाय
माघ २,टेक्सास – अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा आफ्नो १३ वर्षीय छात्रसँग यौनसम्बन्ध बनाउने एक शिक्षकालाई १० वर्षको सजाय सुनाइएको छ ।
हाउसटन मिडल स्कूलकी पूर्व शिक्षिकाले कक्षा ८ मा पढ्ने आफ्नो छात्रसँग यौनसम्बन्ध बनाउने गरेको र आफू गर्भवतीसमेत बनेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
अलेक्जान्ड्रिया भेरालाई ३०......
यस्तो ठाउँ जहा मान्छेको हड्डीको सुप पिउँछन् !
संसारमा यस्ता आदिवासीहरु पनि छन्, जो नरभक्षण एवं अनौठो प्रथासँग जोडिएका छन् । यी दक्षिण अमेरिकी आदिवासी हुन् । उनीहरु ब्राजिलको उत्तर र भेनेजुएलाको दक्षिणतर्फको जंगलमा बसोबास गर्छन् । खासगरी उनीहरु अमेजन बर्षा वनको किनारमा बसोबास गर्छन् । यिनीहरुलाई यानोमानी आदिवासी भनिन्छ ।
जापानमा अनौठो लिंग पर्व (फोटोफिचर सहित)
जापानको कावासाकीमा मनाइने यो लिंग पर्वको......